Ithegi: iintengiso zevidiyo | Martech Zone
Ithegi: iintengiso zevidiyo
Ixesha lokuFunda: 7 imizuzu I-2021 iyakwenza okanye iphule abapapashi. Unyaka ozayo uyakuphindaphinda uxinzelelo kubanini beendaba, kwaye ngabona badlali banobuchule abaza kuhlala bethe nca. Intengiso yedijithali njengoko sisazi ukuba iza kuphela. Sifudukela kwindawo yentengiso eqhekeke ngakumbi, kwaye abapapashi kufuneka baphinde bacinge ngendawo yabo kule ecosystem. Abapapashi baya kujongana nemiceli mngeni ebalulekileyo ekusebenzeni, isazisi somsebenzisi, kunye nokukhuselwa kwedatha yobuqu. Ukuze ndi
Ixesha lokuFunda: 2 imizuzu I-AdCreator yakhiwe ngaphezulu kwe-50 yokuqhubela phambili kunye nokulahla izinto kunye nangaphezulu kwama-200 kuvavanywe kwangaphambili, izinto ezinokwenziwa ngokwezifiso zokwenza intengiso. Iitemplate ezakhelweyo zikhawulezisa uyilo, ukukhula, kunye nokuqinisekisa ukungaguquguquki, kubandakanya indawo yokugcina iVenkile, iVidiyo eseMgceni yeVidiyo, Iigalari, Ukwabelana ngeNtlalontle nokunye. Onke amacandelo kunye neempawu zeAdCreator ziyavavanywa kwizixhobo, iinkqubo zokusebenza, kunye nemeko. I-AdCreator ikwanolawulo oluzenzekelayo lokuqinisekisa ubulunga, ukuze uyazi into oyibonayo kanye yile nto umsebenzisi ayenzayo
Ixesha lokuFunda: 2 imizuzu I-Clipcentric ibonelela abasebenzisi bayo ngokhetho olubanzi lwezixhobo kunye neetemplate ezinikezela ngolawulo olupheleleyo kuwo onke amanyathelo enkqubo yemveliso ekhokelela ekuphenduleni ngokwenyani kweqonga leendaba zentengiso. Amaqela entengiso anokuyila ngokukhawuleza kwaye aphuhlise iintengiso ezinamandla ze-HTML5 ezisebenza ngaphandle komthungo kuyo nayiphi na imeko. Tsala kwaye ulahle indawo yokusebenzela -Ukutsala ngokukuko kwaye ulahle izinto zentengiso kwiindawo ezithile zomsebenzi kulawulo olupheleleyo, kwaye apho ubonayo kuko okufumanayo. URobust HTML5 Authoring-Velisa
Ixesha lokuFunda: 2 imizuzu Indawo yesoftware iyakhuphisana kwaye iintsuku zokudala iapp, ukubiza imali encinci, kwaye ulindele ukufumana imbuyekezo kutyalo-mali kukude kakhulu kumashishini amaninzi. Nangona kunjalo, ukuthengwa kwangaphakathi nohlelo kunye nentengiso ye-in-app iyaqhubeka nokunceda ekwenzeni imali kutyalo-mali olungakholekiyo lomdlalo kunye nabaphuhlisi beapps abatyalayo. IVungle yenye yeenkokeli kolu shishino, ebonelela abapapashi i-SDK eyomeleleyo yentengiso yevidiyo esebenzisana nayo
NgoLwesibini, Julayi 21, 2015 NgoMvulo, Oktobha 12, 2015 Douglas Karr
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Imigangatho iyimfuneko xa kufikwa kwintengiso yentengiso ekwi-Intanethi kunye nobukhulu bokubiza isenzo. Imigangatho yenza ukuba upapasho olufana nolwethu lubeke emgangathweni iitemplate zethu kwaye liqinisekise ukuba ubeko luya kuhlala kwiintengiso abasele bezenzile kwaye bavavanya kuyo yonke inetha. Nge-Google Adwords ekubeni yintloko yokubekwa kwintengiso, intsebenzo yokuhlawula ngokucofa intengiso kuyo yonke iGoogle inyanzelisa ishishini. Ubungakanani beNtengiso obuPhambili kwiBhodi yabaphambili kaGoogle -Iiphikseli ezingama-728 ububanzi ngeepikseli ezingama-90 ezide